Sawirqaadihii Daacish oo 10-sanno oo xabsi ah lagu xukumay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSawirqaadihii Daacish oo 10-sanno oo xabsi ah lagu xukumay
August 30, 2021 Puntland Mirror Somalia 0
Xubin Daacish ah Cabdisamad Ibraahim Cumar. [Isha Sawirka: Gungaar]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa manta oo Isniin ah 10-sanno oo xabsi ah ku riday Cabdisamad Ibraahim Cumar, oo ahaa sawirqaadihii maleeshiyada ISIS/Daacish.
Cabdisamad oo kasoo jeeda deegaanka Garissa ee dallka Kenya ayaa ku biiray malleshiyada ISIS ee ku sugan Puntland sanadkii 2016, sida ay sheegeen saraakiisha maxkamada.
Waxa uu ahaa sawirqaadihii dagaalkii dhexmaray labada maleeshiyo ee Al-Shabaab iyo Daacish oo ka dhacay gobolka Bari sanadkii 2018, sida uu u sheegay saraakiisha dambi-baarista.
Waxaa maleeshiyadu ay u wareejisay magaalada Muqdisho balse haayadaha ammaanka ayaa ku xiray garoonka, saraakiisha maxkamada ayaa intaas ku daray.
February 11, 2021 DFS oo sheegtay in aysan marna aqbalayn in mar afraad dib loo dhigo dhageysiga muranka kiiska badda
Ugu yaraan sagaal qof oo ku dhaawacantay weerar ka dhacay jaamacada gobolka Ohio ee Mareykanka
Ohio-(Puntland Mirror) Ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay Jaamacada gobolka Ohio kaasoo ay qaadeen labo qof maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen warbaahinta Mareykanka. Warbaahinta maxaliga ah ayaa kusoo waramay [...]